Kuti uwedzere kushanda uye kuderedza kupisa kwekushisa kwesimbi kupisa, iyo kuburitsa kusungurudza tekinoroji inokurudzirwa. Kubatsira kweiyi tekinoroji kunosanganisira kunyanya munzvimbo chaiyo yekudziya inopihwa kune yakasungwa majoini. Zvichienderana nemhedzisiro yenhamba simulation zvakabva zvagoneka kugadzira maparamendi anodiwa kuti uwane kudziya kwekudziya panguva yaidiwa. Chinangwa chaive chekudzikisira nguva ino kudzivirira isingadiwe kupisa mhedzisiro pasimbi panguva yekubatanidzwa kwemetallurgical..Mhedzisiro yenhamba yekunyepedzera yakaratidza kuti kuwedzera frequency yazvino kwakakonzera kuwanda kwekupisa kwakanyanya munzvimbo dzepamusoro dzesimbi dzakabatanidzwa. Nekuwedzera ikozvino, kuderedzwa kwenguva inodiwa kusvika pakupisa kwebrazing kwakaonekwa.
Zvakanakira induction brazing yealuminium vs. torch kana flame brazing
Iyo yakaderera kunyungudika tembiricha yealuminium base masimbi yakasanganiswa neyakatetepa tembiricha hwindo remabraze alloys anoshandiswa inonetsa kana torch ichibatidza. Kushaikwa kwekuchinja kweruvara uku kupisa aluminium hakupi braze vanoshanda chero chiratidzo chekuona kuti aluminium yasvika pakudziya kwayo. Braze opareta vanounza akati wandei emhando kana torch brazing. Pakati peizvi zvinosanganisira marongero etochi uye mhando yemoto; chinhambwe kubva patochi kuenda kuzvikamu zviri kubhurwa; nzvimbo yemurazvo maererano nezvikamu zviri kubatanidzwa; nezvimwe.
Zvikonzero zvekufunga kushandisa induction heat apo brazing aluminium inosanganisira:
Kukurumidza, kupisa nekukurumidza
Kudzorwa, kwakanyatso kudzora kupisa
Sarudza (localized) kupisa
Kugadzirisa mutsara wekugadzira uye kubatanidzwa
Hupenyu hwekugadzirisa uye huri nyore
Inodzokororwa, yakavimbika brazed majoini
Kubudirira induction brazing yealuminium zvikamu zvinoenderana zvakanyanya nekugadzira induction heat coils kutarisisa iyo electromagnetic kupisa simba munzvimbo dzinofanirwa kukwizwa uye kudzipisa zvakafanana kuitira kuti braze alloy inyauke uye kuyerera nemazvo. Macoil e induction akagadzirwa zvisina kufanira anogona kukonzera kuti dzimwe nzvimbo dzipiswe uye dzimwe nzvimbo dzisawana simba rekupisa rakakwana zvichikonzera kuti pasave nekubatana kwebraze.
Kune yakajairika brazed aluminiyamu chubhu joint, anoshanda anoisa aruminiyamu braze mhete, kazhinji ine flux, paaluminium chubhu uye anoisa iyi mune imwe yakawedzera chubhu kana bhuroko inokwana. Zvikamu zvinozoiswa mu induction coil uye inopisa. Nenzira yakajairwa, iyo braze filler simbi inonyungudika uye inoyerera ichipinda mujoint interface nekuda kwecapillary chiito.
Nei induction braze vs. torch braze aluminum zvikamu?
Chekutanga, diki kumashure pane zvakajairika aruminiyamu alloys akajairika nhasi uye akajairika aruminiyamu braze uye masoja anoshandiswa kujoinha. Brazing aruminiyamu zvikamu zvinonyanya kunetsa pane brazing mhangura zvikamu. Mhangura inonyunguduka pa1980°F (1083°C) uye inochinja ruvara kana ichidziya. Aluminium alloys anowanzo shandiswa muHVAC masisitimu anotanga kunyunguduka kusvika pa1190°F (643°C) uye haapi chero zvinoonekwa, sekuchinja kweruvara, pazvinopisa.
Yakanyatso kudzora tembiricha inodiwa semusiyano mukunyunguduka uye kupisa kwekupisa kwealuminium, zvinoenderana nealuminium base simbi, braze filler simbi, uye huwandu hwezvinhu zvinofanirwa kugarwa. Semuyenzaniso, Musiyano wetembiricha pakati peiyo solidus tembiricha yeaviri akajairwa aluminium alloys, 3003 akatevedzana aluminium, uye 6061 akatevedzana aluminium, uye tembiricha yemvura inogara ichishandiswa BAlSi-4 braze alloy i20 ° F - yakatetepa tembiricha process hwindo, nokudaro zvichidikanwa. kudzora chaiko. Kusarudzwa kwema base alloys kwakakosha zvakanyanya nealuminium masisitimu ari kucheneswa. Iyo yakanakisa tsika ndeye braze pane tembiricha iri pazasi peiyo solidus tembiricha yealloys iyo inogadzira izvo zvikamu zviri brazed pamwechete.
Zvinofanira kuonekwa kuti galvanic corrosion inogona kuitika pakati pezinc-rich nzvimbo uye aluminium. Sezvakataurwa mugalvanic chart muMufananidzo 1, zinc haina kunaka uye inoita kunge inodic kana ichienzaniswa nealuminium. Iyo yakaderera iyo inogona mutsauko, yakaderera mwero wekuora. Musiyano ungangoita pakati pezingi nealuminium ishoma kana ichienzaniswa neinogoneka pakati pealuminium nemhangura.
Chimwe chiitiko kana aruminiyamu yakashongedzwa nezinc alloy iri pitting. Sero remunharaunda kana gomba gomba rinogona kuitika pane chero simbi. Aluminium inowanzo chengetedzwa nefirimu rakaoma, rakatetepa rinoumba pamusoro kana rasangana neokisijeni (aluminium oxide) asi kana flux ichibvisa iyi inodzivirira oxide layer, kunyungudika kwealuminium kunogona kuitika. Iyo yakareba simbi yekuzadza ichiramba yakanyungudutswa, iyo yakanyanya kunyungudika kunyungudika.
Aluminium inoumba yakaoma oxide layer panguva yebrazing, saka kushandiswa kwekuyerera kwakakosha. Fluxing aruminiyamu zvikamu zvinogona kuitwa zvakaparadzana pamberi pebrazing kana aluminium brazing alloy ine flux inogona kuisirwa mukuita brazing process. Zvichienderana nerudzi rwekuyerera kunoshandiswa (corrosive vs. non-corrosive), imwe nhanho inogona kudiwa kana iyo inoyerera yakasara ichifanira kubviswa mushure mekubhuroka. Bvunza nemugadziri webraze uye flux kuti uwane kurudziro pane brazing alloy uye flux zvichibva pane izvo zviri kubatanidzwa uye inotarisirwa kupisa tembiricha.
Categories Technologies Tags Al tubes induction brazer, aluminium brazing, aluminium mapaipi induction brazing, machubhu ealuminium anopisa, aluminium machubhu induction brazing, tenga induction aluminium brazer, induction aluminium brazer, Induction Aluminum Brazing, induction aluminium tubes brazing, Induction Brazing Aluminium, induction brazing heater Post navigation